Farshaxanka Farshaxanka si aad u soo dejiso | Hal-abuurka khadka tooska ah
Farshaxanka Art Deco si loo soo dejiyo
Iris Gamen | 08/05/2022 23:16 | Fuentes
Dhaqdhaqaaqa Art Déco, isticmaalka khadadka tooska ah iyo qaababka joomatari ayaa ahaa mid sifo ah, oo raadinaya qaab gaar ah iyo dheelitirnaan. Qoraalkan maanta, waxaan ku soconaa soo ururi wejiyada farshaxanka deco kuwaas oo si daacad ah u raacaya quruxda dhaqdhaqaaqan.
Habkan faneed waxaa laga soo qaaday horraantii 20-kii ilaa dabayaaqadii 30-kii, isagoo noqday bilic la socday dhaqdhaqaaqii dhaqan iyo bulsho ee waagaas.
Inkasta oo uu ahaa qaab wadamo kala duwan laga soo hormariyay, Maraykanka iyo Faransiiska ayaa ahaa aasaaskii dhaqdhaqaaqan. Farta qoraalka ah ee aynu kaga hadli doono qaybta xigta waxay si fiican u soo bixi kareen wakhtiga aynu ka wada hadalnay.
1 art deco, taariikhda
2 Tilmaamaha Art Deco
3 Wajiyada Farshaxanka Deco
3.2 Kala soocida
art deco, taariikhda
Waxaa jira qaabab badan oo taariikhda oo dhan saameeyay qaybta naqshadaynta iyo takhasusyada kale labadaba. Gudaha 20-meeyadii, waxay u yimaadeen inay kacaan dhaqdhaqaaqa Art Deco kaas oo ku salaysnaa isticmaalka qaababka joomatari iyo qurxinta.
Asalkii ugu weynaa ee dhaqdhaqaaqan faneedku wuxuu udub dhexaad u yahay Yurub iyo markii dambe ee Maraykanka. Art Deco wuxuu yimid in ka badan qarni ka hor, laakiin weli si dhuumasho ah u galaya naqshadaha hadda. Ma ahayn qaab raadin shaqo ama raaxo, si fudud hawsheeda ugu weyn waxay ahayd qurxinta.
El dhamaadka marxaladda dhaqdhaqaaqa faneedkan, wuxuu la yimid bilawgii dagaalkii labaad ee aduunka. Dhacdadani waxay sababtay muuqaalka dabeecadda cusub ee naqshadeynta, wax walba waxay noqdeen kuwo aad u shaqeynaya iyaga oo iska ilaalinaya isticmaalka walxaha qurxinta ee casriga ah.
Tilmaamaha Art Deco
Sida aan horayba u soo sheegnay, Art Decó waa a odhaah faneed oo saamayno badan oo kala duwani isugu yimaadaan, dhammaan la xidhiidha casriyaynta.
dhaqdhaqaaqan, Waxay fulisaa sifooyin taxane ah oo ka dhigaya in la aqoonsado si degdeg ah, waxaan uga hadalnay isticmaalka joomatari, summetry iyo isticmaalka midabka.
Ugu horreyntii, waxaan ka hadalnaa sifada ugu weyn ee dhaqdhaqaaqa farshaxanka, isticmaalka walxaha joomatari. Waxaa ka mid ah walxahaas waxaan ku muujineynaa isticmaalka line toos ah sida element ugu weyn, isku darka xariiqyada toosan iyo zigzag, isticmaalka curyaaminta, wareegyada iyo wareegyada, iyo sidoo kale dhadhanka tirooyinka sida hexagons iyo octagos.
Isticmaalka walxaha joomatari waxay la xidhiidhaan raadinta summadeedka. Art Deco ayaa caqabad ku noqday qaababka iyo shuruudaha lagu arkay art nouveau. Marka la eego isticmaalka midabka, kuwani waxay u muuqdaan inay yihiin dhalaalaya oo firfircoon.
Wajiyada Farshaxanka Deco
Ka dib socdaalka waxa dhaqdhaqaaqani yahay iyo astaamihiisa ugu muhiimsan, waa waqtigii la fiirin lahaa arrintan soo ururinta wejiyada ugu wanagsan ee uu dhiirigeliyay Art Deco diyaar u ah soo dejinta.
far qoraal ah qurux badan oo isla markaana qurux badan, oo ay dhiirigelisay dhaqdhaqaaqa faneed ee aanu kaga hadlayno qoraalkan. Haddii aad la shaqeyso, waxaad shaqadaada ku dari doontaa miyir-qab iyo muuqaal muuqda.
Waa a design ku salaysan qaabkii 20-meeyadii kuwaas oo xarfaha waaweyn iyo kuwa hoose ay ku jiraan si loo soo dejiyo. Ha ka werwerin sababtoo ah way ku habboon tahay Word, marka lagu daro dhammaan barnaamijyada Adobe iyo kuwa kale oo badan.
Heesta afar gees leh oo ka duwanaansho sare leh Waxaa sameeyay Emtype Foundry, waxay u shaqeysaa sidii soo jiidasho leh oo lagu daray nooc kasta oo far shaqaynaysa.
Abuurayaashu waxay yiraahdaan waxay leeyihiin dhiirigeliyay marxaladda Art Deco iyo far-maqaarka loo isticmaalo calaamadaha ganacsiga. Waa nooc sans ah, oo leh kala duwanaansho sare oo qurux badan oo la safeeyey.
Dhaqdhaqaaqa Art Decó wuxuu ku jiray horumarinta nooca nooca caadiga ah oo leh qaab dhumuc weyn leh iyo dhammaystir aad u nadiif ah. Waa in la ogaadaa in fartani ay isticmaasho naqshadaynta xarfaha waaweyn marka aynu rabno in aan isticmaalno xarfaha yaryar. jira xarfaha asalka ah marka la isticmaalayo far yar sida xarafka O iyo Q.
Xaaladdan oo kale, waxaan kuu keenaynaa qoraal ah in waxay ka dhigan tahay boqolkiiba boqol Art Deco naqshad kasta kaas oo aad ku isticmaasho. Waa qaab-qoraalka caadiga ah, oo leh hawo xarrago leh. Xarafkeedu waa nashqad saafi ah oo adag.
Waxaad ka heli kartaa saddex miisaan oo kala duwan oo aad ku shaqeyso; caadiga ah, geesinimada, iyo iftiinka, iyo sidoo kale xarfo waaweyn iyo kuwa yaryar. Mid kasta oo ka mid ah noocyadiisa, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato 360 isku darka monogram oo kala duwan, xarfo iyo beddelaadyo.
La yaab run ah xagga naqshadaynta qoraalka, ku salaysan casriyaynta iyo waayaha mustaqbalka sida filimka oo isku magac ah. Qaar ka mid ah xirfadlayaasha naqshadeynta waxay u arkaan saameyn cad oo horumarinta magaalada oo ka mid ah jilayaasha.
Far qoraaleed sax ah oo Czech ah haddii aad rabto inaad ku shaqeyso farta Czech. qaabka canabka, oo leh nashqad daahsoon oo ay dhiirigelisay dhaqdhaqaaqii fanka ee 20-kii, Art Deco.
Nooca serif, kaas oo aad u badan functional iyo doorasho aad u fiican ee dhammaan noocyada naqshadeynta oo leh bilicsanaantan sida boodhadhka, calamadaha, calaamadaha, iwm. Waxaad fursad u heli doontaa inaad ku shaqeyso xarfaha far waaweyn iyo kuwa hoose iyo sidoo kale calaamadaha xarakaynta iyo nambarada.
Magaceeda oo aan horeyba diiradda u saarnay waqti ina xusuusinaya markii shaleemada lagu soo bandhigay madow iyo caddaan. Waxay si fiican isugu daraysaa qaabkan mid ka mid ah Art Deco.
ka Dhammaystirka jilayaashiisu waa kuwo cajiib ahIntaa waxaa dheer, walxaha qurxinta waxaa laga heli karaa xarfaha qaar, sida baarka xarafka A, H ama dabada qaloocan ee Q.
Si cad oo ku salaysan Art Decó ee 20-meeyadii, kaas oo khadadka nadiifka ah oo wareegsan ayaa shaqeeya. Waxa ku jira saddex dhumuc oo kala duwan si loo isticmaali karo, marka lagu daro alifbeetada dhammays tiran ee xarfaha sare iyo kuwa hoose. Waxa kale oo lagu kabay buug dhammaystiran oo nambaro luuqado badan ah iyo calaamado xarakayn.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin a typography waxaa dhiirigeliyay dhaqdhaqaaqii fanka ee 20-meeyadii oo leh qaab xarrago leh, tani waa doorashada ugu fiican. Kaiju, waxa uu ka kooban yahay laba xaraf oo xarfo waaweyn ah kuwaas oo ku siin doona fursad aad ku midayso siyaabo kala duwan si aad u abuurto qaabkaaga qoraalka.
Saddex miisaan oo kala duwan si ay ula shaqeeyaan tan typography oo leh tixraac cad oo ku saabsan Art Decó. Kaliya xarfaha xarfaha waaweyn, iyo nambarada iyo calaamadaha xarakaynta, ayaa ku jira soo dejintaada.
Ku tijaabi wejigan nooc kasta oo nakhshad ah waxaa dhiirigeliyay dhaqdhaqaaqan oo ku raaxayso sida ugu habboon ee ay ula qabsanayso iyaga.
Waxaan rajeyneynaa in liiskan kheyraadku uu ku caawin doono marka aad haysato mashruuc naqshadeyn ah oo hortaada ah kaas oo udubdhexaadiyuhu yahay dhaqdhaqaaqa farshaxanka ee 20-meeyadii, Art Decó.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Farshaxanka Art Deco si loo soo dejiyo
Sida blur ee Procreate
Qoraallada asalka ah ee cinwaannada